Okukhethiwe: I-Who, What futhi Yikuphi Okumakethwa Kuthonya | Martech Zone
Okukhethiwe: I-Who, What futhi Yikuphi Okumakethwa Kuthonya
Amanye amapulatifomu obuchwepheshe bokumaketha aguga njengewayini elimnandi njengoba eqhubeka nokuphumula izingqinamba ezikhathaza abathengisi. Izikhundla ibonakala ingenye yalezo zingxenyekazi. Lapho senza okuthunyelwe eminyakeni embalwa edlule, kwakuyipulatifomu enhle enhle enikeza ithonya ngesihloko nangomuntu - ilusizo kakhulu ngaleso sikhathi. Eminyakeni eminingi kamuva futhi kuyinkundla yezentengiso ebanzi engasiza ukuthuthukisa amasu wokuqukethwe wezinkampani ukuthola igunya ezimakethe ezithile abafisa ukuzilandela.
Emuva ngosuku, ukuthengisa nokumaketha kwakulula. Imininingwane okungahle kutholakale ukuthi ikhasimende ilawulwa nguwe - okokuqala nje ngokusebenzisa izikhangiso zakho (i-inthanethi yangaphambilini) bese kuba kuwebhusayithi yakho. Ukuthengisa kungabe sekuqongelela, kugcwalisa lonke ulwazi, bese kuvalwa isivumelwano. Kulezi zinsuku, lokho kususwe ngokuphelele. Izibalo zakamuva zikhombisa lokho U-60% wohambo lwabathengi lwenzeka ngaphambi kokuba ikhasimende lifinyelele nakuwe.
Lokho u-60% yilokho okubizwa ngama-Appinion ukumaketha okungalawulwa - Imikhiqizo yayingazi ukuthi amakhasimende abo angahle afundani, babeyifunda kuphi, ngubani owayethi ini, yikuphi kwezigidi zemibono ngomkhiqizo wakho laphaya okubalulekile, njll. Kuze kube manje! - Izithasiselo zikunikeza lokho kuqonda futhi zikuvumela ithonya wonke lawa maphuzu amasha wokuthinta amakhasimende.
Kunoma yisiphi isihloko esinikeziwe, ama-Appinion avela ukuthi ubani uthini, futhi yimuphi waleyo mibono obaluleke ngempela. Ama-Appinins afaka amashumi ezigidi zama-athikili usuku ngalunye, futhi ahlaziye ngubani usho ini mayelana okuyinto izihloko, ngokuya ngeminyaka yocwaningo lokucubungula ulimi lweCornell. Amaphuzu wedatha afinyelela kukho konke ukusabela ku-inthanethi, ungaxhunyiwe ku-inthanethi, imithombo yezindaba zangempela, ithelevishini, kanye nemithombo yezokuxhumana.
Njengomakethi, lapho-ke ungenza izinto eziningi ezinhle ngaleyo datha. Ungafisa ukufinyelela kulabo bathonya futhi ubazise ngomkhiqizo wakho. Noma ungasebenzisa idatha yesihloko (okusho ukuthi yiziphi izinto abantu abakhuluma ngazo ezizwakalayo) ukuqondisa isu lakho lokumaketha okuqukethwe. Noma ungafisa ukuthola izipikha zomcimbi. Noma ungafisa ukukala impumelelo yokwethulwa komkhiqizo, njll.
Iphrofayili Egcwele Yomthelela
Tags: ama-appinionidatha yethonya lokuncintisanaukumaketha kwamathonyaipulatifomu yokuthengisa enomthelelaokuqukethwe okunomthelelaukuhlaziywa kwemizwaideshibhodi yesihloko
Jul 19, 2011 ngo-10: 05 PM
Lokhu kuyathakazelisa. Ngizohlola. Ngivumelana nemicabango yakho kuKlout.
Lokho kubonakala kahle kuhle!
Aug 7, 2014 ku-11: 43 AM
Ngacwaninga futhi ngazama amapulatifomu amaningi wokumaketha lapho nginikeza amandla ngokubambisana kwe-Influence Marketing: Ungadala Kanjani, Uphathe, Futhi Ulinganise Abathonya Bomkhiqizo ngonyaka odlule, futhi ngemuva kwakho konke lokho ngiyaqiniseka ngokusho ukuthi Izikhundla zingenye yebhizinisi eliphelele kakhulu amapulatifomu atholakalayo. Kunconywe kakhulu.
Aug 7, 2014 ngo-2: 01 PM
USam - ngiyabonga kakhulu ngenothi. Kubantu abafisa ukufunda incwadi kwi-Influence Marketing - qiniseka ukuthi uyayithatha incwadi kaSam! Ukumaketha Kuthonya: Ungawakha Kanjani, Ulawule, Futhi Uwalinganise Abagqugquzeli Bomkhiqizo Kwezokumaketha Kwezenhlalo (iQue Biz-Tech)